Manchester City oo Guul Raaxo ah ka Gaartay United xili Arsenal Bar-baro waqti dambe ka heshay Wolves+SAWIRRO – Gool FM
Manchester City oo Guul Raaxo ah ka Gaartay United xili Arsenal Bar-baro waqti dambe ka heshay Wolves+SAWIRRO
( Premier League ) 11 Nof 2018. Manchester City ayaa u awood sheegatay Man United oo ay kaga adkaadeen 3-1 kulan ka dhacay Etihad Stadium.
Kulanka ayaa qeybta hore lagu kala maray 1-0, waxaana hogaanka u dhiibay City daqiiqadii 12-aad David Silva markii kubbad darbo xoogana uu goolka ku hubsaday.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha dambe City ayaa dhanka kasta kaga wanaagsaneed united iyagoo inta badan maamuleysay dheesha.
Daqiiqadii 48-aad Sergio Aguero ayaa goolka labaad u dhaliyay City markii uu si wanaagsan kubbad ula cayaaray Mahrez ka hor inta uusan shuud xoogan dhaafin goolhaye Dea Gea.
United ayaa la timid goolka calanka waxaana shabaqa u gaaray Martial taaso aheyd rigoore kaddib galay lagu galay Lukaku oo markaa badal kusoo galay.
Laakiin waxaa rajada Red Devils dilay laacib Gundogan oo goolka seddaxaad u dhaliyay kaddib caawin u qurux badan uu ka helay Bernando Silva.
Dhanka kale Arsenal ayaa barbaro waqti dambe ah waxay la gashay dhigeeda Wolves kaddib markii kulankooda uu ku idlaaday 1-1.
Arsenal ayaa inta badan laga hayay hogaanka kulanka waxaana goolka daah furka wolves u dhaliyay laacibka Ivan Cavaleiro daqiiqadii 13-aad.
Laakiin dhammaadka dheesha ayaa waxaa goolka bareejada u dhaliyay Henrikh Mkhitaryan, laakiin gabgabada waqtigii dheeriga wolves ayaa ku dhawaatay iney helaan guusha cayaarta markii mid kamida cayaariyahaneeda uu dhanka sare goolka Arsenal darbad xoogan ku garacay.
Arsenal ayaa natiijadan kaga dhigan tahay in aysan wax guul gaarin afartii kulan ee u dambeysay iyadoo seddaxdii cayaar ee lasoo dhaafay horyaalka bareejo galay inkastoo weli ay yihiin guuldarro la’aan.
Barcelona oo lagu Bahdilay garoonkooda Kaddib Guuldarro ay kala kulmeen Real Betis+SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Milan vs Juventus